Monitoring Generator - Shenzhen Joint Technology Co., Ltd
nidaamka hawlgalka matoor Base waa nidaamka isku dhafan maamulka kaas oo diyaariyey on nidaamka hawlgalka maalin kasta, waxaa ka mid ah muuqaalada sida xaaladda matoor waqtiga dhabta ah iyo la socodka alarm, maareynta nidaamka hawlgalka, hawlgalka maamulka shaqaalaha, maamulka dayactirka maalin kasta, maamulka dayactirka waaweyn, maamulka accessories, iyo aasaasiga ah maareynta macluumaadka, iwm
markii Real xaaladda hawlgal salka iyo la socodka digniinta, taageero darfaha ugu muhiimsan ee ay gacanta ku, taageero ilaa 37 darajo oo 18 alaarmiga socodka
Dayactirka iyo maareynta nidaamka dayactirka Major
Dayactirka iyo Entry: Marka dayactirka la dhammeeyo, macluumaadka loo gelin karaa via mobile iyo geliyaan sawirada qabtay xarunta, ama loo gelin karaa qofka loo xil saaray in ay PC marka ay dib u helaan xafiiska
qorshaha bisha soo socota
hanti dhowrka Plan
maareynta hanti dhowrka
warbaahinta jirka Fulinta dayactirka
Gebaggabee unit dayactir
dib markii daawaynta la dhameeyo, diiwaangelinta Warshadda
Diiwaangeli in warshad
Generator waxaa loo qaaday warshad in ay diiwaan-iyo dayactirka
maamulka habka dayactirka
maamulka Alarm: Marka alaarmiga kiciyay, alarm la isla markiiba loo diri doonaa mobile horena ka agaasimayaasha, injineero, iyo farsamo, si ay u wargeliyaan saldhigga macluumaad aasaasi ah, xaaladda koronto, suurto gal ah oo khaldan, iyo macluumaadka khuseeya, haddii ay dhacdo shaqaalaha qaadan kartaa degdeg ah iyo tallaabo xaq.
Job Entry: Ka dib markii dayactir cawdu ka, xaaladaha cusboonaysiiyey loo gelin karaa ka app mobile, iyo geliyaan sawiro la qabtay, ama soo gashay by shakhsi loo qoondeeyey in computer marka dib xafiiska.
Degdegin Report Repair: Dhamaan warbixin dayactir rush taariikhda la eegi karo sida maalin kasta, halkii todobaad, ama bil kasta, warbixinta laga karaan macaamiisha.
Waayo, cusboonaysiintoodii ay ka baxsan wakhti go'an, waxaa jiri doona qof cas bandhigay.
Taariikhda falanqaynta: Nidaamka kala dhig dhigi karaa dayactir rush ee bil kasta ka, waxaa ka mid ah waqtiga ku qaatay, accessories bedelay, meesha saldhigga, dayactirka inta jeer, oo sano matoor adeegga, iwm